Sidee loo kala hooggaaminayaa Group A-D tartanka Champions League-ga ka hor kullamada caawa? – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Sidee loo kala hooggaaminayaa Group A-D tartanka Champions League-ga ka hor kullamada caawa?
By admin on 06/11/2018 No Comment
Talaaddo, November, 6, 2018(HNN) Group-ka A ee tartanka Champions League-ga waxaa hooggaankiisa heysa naadiga Borussia Dortmund oo sagaal dhibcood leh, iyagoo adkaatay dhammaan saddexdeeda kullan ee ay ciyaartay.
Atletico Madrid ayaa iyadane leh lix dhibcood, keliya Borussia Dortmund ayaa garaacday kullankii ugu dambeeyay ciyaar 4-0 lagu xaqaay kooxda reer Spain.
Monaco iyo Bruge ayaa min dhibic leh, labadooda ayaana bareejo wada galay, waxaase booska saddexaad ku jirta Monaco.
Waxaa group-kan hooggaankiisa sagaal dhibcood kula naallooneysa Barcelona oo saddex kullan guul gaartay, sagaal dhibcoodne leh, halka Inter Milan ay lix dhibcood la fadhiso booska labaad, halka Tottenham Hotspur ay hal dhibic la wadaagto PSV Eindoven, ha yeeshee Spurs ayaa saddexaad ku jirta.
Liverpool ayaa hooggaanka u heysa Group-ka C, waxaana ay guuleysatay laba kullan, iyadoo Napoli khasaaro kala kullantay.
Napoli waxa ay leedahay Shan dhibcood, iyadoo ah kooxda keliya aan dhinaceeda la dhigin Group-kan C, PSG ayaa afar dhibcood leh oo booska saddexaad ku jirta, halka Red Star ay hal dhibic booska afraad la fadhiso.
Group u badan kooxo isku awood dhow inuu yahay ayaa la tilmaamaa, waxaase hadda ugu muruq weyn kooxda FC Porto oo kaalinta koowaad ku hooggaamineyso Toddobo dhibcood ku horkaceyso, waxaase ku xigta Schalke 04 oo iyadane Shan dhibcood booska labaad la fadhisa, Galatasaray ayaa iyadane 4 dhibcood leh, halka Lokomotiv Moscow aysan weli shaqeysan wax dhibic ah.
Sidee loo kala hooggaaminayaa Group A-D tartanka Champions League-ga ka hor kullamada caawa? added by admin on 06/11/2018